Madaxweyne Uhuru kenyaatta oo ku dhawaaqay inay tahay musiibo qaran abaarta saamaysay qeybo ka mid ah ee dalka | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweyne Uhuru kenyaatta oo ku dhawaaqay inay tahay musiibo qaran abaarta...
Madaxweyne Uhuru kenyaatta oo ku dhawaaqay inay tahay musiibo qaran abaarta saamaysay qeybo ka mid ah ee dalka
Madaxweynaha dalka Mudane Uhuru Kenyatta ayaa maanta oo Arbaco ah 8da bishan September 2021-ka ku dhawaaqay in abaarta saameysay qeybo ka mid ah dalka ay tahay musiibo qaran.
Sidaa darteed, Madaxweynuhu wuxuu faray Hanti –dhowraha Qaranka iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Isuduwidda howlaha Xukuumadda ee dalka inay hormuud ka noqdaan dadaallada Dowladda ee lagu caawinayo qoysaska ay dhibaatadu ka soo gaartay abaarta ku dhufatay owgeeda.
Waxaa uu madaxweynaha sido kale faray xukumadiisa inay gaar gaar biyo inyo cuno ah la gaarto qoysaska iyo xoolaha ay saamaysay abaarta.
Go’aanka mr kenyaatta ayaa daba socda kulan maanta dhexmaray Madaxa Kenya iyo 85 hoggaamiyaal kale oo ka kala socday dhulalka ay saameynta ku yeelatay abaarta waxaana hogaaminayay wasiirka Maaliyadda ee dalka Ukur Yatani.
Dowladda ayaa sheegtay in tallaabooyin dhammeystiran ee abaaraha ku aadan dhawaan la soo saari doono.
Previous articleDHAGEYSO:Shacabka Kismaayo oo ka hadlay khilaafka Farmaajo iyo Rooble
Next articleMadaxweynaha dalka Estonia oo berri booqasho ku imaanaysa Kenya